पालुङ्टारबासी विकास चाहन्छन्, त्यसको लागि राज्यको सहजिकरण होस - Palikanews.com
पालुङ्टारबासी विकास चाहन्छन्, त्यसको लागि राज्यको सहजिकरण होस
मेयरसँग ६ प्रश्न ?
पालिका न्यूज | पालिका डेक्स
८ कार्तिक २०७७, शनिबार १३:१३
स्थानीय तह केन्द्रित विषयमा सटीक प्रश्न सटीक जवाफको श्रीङ्खला प्रमुखसँग ६ प्रश्न ? मा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत गोरखा जिल्लाको स्थानीय तह पालुङ्टार नगरपालिका प्रमुख ई. दीपक बाबु कंडेलसँग पालिका न्यूज डेक्सले गरेको संवादको सम्पादित अंश :
१) यतिबेला चाडवाडको समय छ ? तपाइँको पालिकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम कत्तिको छ ?
चाडवाडको समयमा बाहिरबाट आउनेहरुले होम क्वारेन्टीनमा बस्ने कमिन्टमेन्ट गर्नुभएको छ । झैण्डै ५५ जना कोरोना संक्रमित मध्ये ११ जना सक्रिय संक्रमित हुनुहुन्छ । पालुङ्टार भित्रै एक जनाको मृत्यु भएको छ । पालुङ्टारका तर बाहिर रहेका केहिको मृत्यु भएको जानकारी आएको छ । अहिलेको स्थिति हेर्दा ठूलो खालको डिज्यास्टर्ड हुन्छ भन्ने छैनौँ । किनकी यहाँका आम नागरिक सर्तक भएको अनुभुति भएको छ ।
२) कोरोना संक्रमणका कारण विकास निर्माणका काममा के कस्तो प्रभाव परेको छ ?
विकास निर्माणमा एकदमै प्रभाव परेको छ । किनभने हामी कहाँ यहाँ मेनपावर नहुने बाहिरबाट मेनपावर ल्याउँदा यहाँका समुदाय त्रसित हुने, केहि राष्ट्रिय महत्वका योजनाका कामहरु रोकिएको अवस्था र पालुङ्टार भित्रका योजनाहरु पनि रोकिएको अवस्था छ । यसले गर्दा विकास निर्माणमा रोकावट पैदा भएको छ । लक्ष्यमा पुग्न सकिएको छैन ।
३) तपाइँको पालिकामा यो बर्ष के कस्ता कार्यक्रमहरु प्रमुख प्राथमिकतामा परेका छन् ?
हाम्रो नगरपालिका नयाँ नगरपालिका हो । हामी कहाँ भौतिक पूर्वाधाार इन्फाइस्टक्चरको अभाव छ । यीनै कुराहरु पहिलो प्राथमिकतामा छन् । सँगसँगै हामीले विकास निर्माणका कामहरुलाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिएका छौँ । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगाएतका विषयहरुलाई नै प्रमुखतामा राखेका छौँ । यो बाहेक पालुङ्टारमा उत्पादन भएको कृषिको बजारिकरणका लागि कृषि एम्बलेन्सको पनि सुरुवात गरेका छौँ । यसको मतलब हाम्रो उत्पादन नेपालका बजारहरुमा पुर्याउँछौँ भन्ने हो । व्यवसायीक कृषिका लागि हाम्रो योजना निर्दिष्ट भएको छ ।
४) प्रदेश र केन्द्रमा प्रतिपक्षि दलको सरकार छ, सहयोग कत्तिको पाउनुभएको छ ?
तपाइँले गजबको प्रश्न गर्नुभयो । यहाँ त कहिले काँही त शंका लाग्छ । यो भएको बेला विकास निर्माणको काम नै गर्नु हुन्न । यो फरक पाटो हो भन्ने किसिमको बुझाई पनि छ कि जस्तो लाग्छ । हामीले स्मार्ट सिटिको कुरा गरिरहेका छौँ, राज्यले १ करोड १५ लाख रुपैँया दाम पैसा पठाएको छ । के बनाउने हो त्यसले कन्फ्युजन छ । हाम्रो बसपार्क हामी ३/४ वर्षदेखि डिजाईन गरेर बसिरहेका छौँ सम्बन्धित ठाउँहरुमा धायौँ बन्न सकेको छैन । यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दा पनि पालुङ्टारबासी विकास चाहन्छन् भन्ने लाग्छ । त्यसका लागि सहजिकरण होस भन्ने लाग्छ । धेरै ठूलो असहयोग छ त म भन्दिन तर सोचे जस्तो जुन कुरा हामीले प्रोजेक्ट बैंक बनाएका छौँ त्यो काम गर्न सकेका छौनौँ । मलाई लाग्छ नेपालका धेरै नगरपालिकाहरु मध्येमा प्रोजेक्ट बैंक बनाउने पहिलो नगरपालिका हो पालुङ्टार । अहिले राज्यले प्रोजेक्ट बैंकको कुरा गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा मेनपावरको पनि कमि थियो अहिले त्यस्तो छैन । तरपनि सोचेजस्तो सपोर्ट छैन ।
५) तपाइँको कार्यकालमा पालिकामा सम्पन्न भएका महत्वपूर्ण योजनाहरु के–के छन् ?
पालुङ्टारमा हामीले केहि खानेपानीका योजनाहरु सम्पन्न गरेका छौँ । प्रदेश र संघको सहयोगमा भएपनि । एक घर एक धाराको निति अनुसार अघि बढेका छौँ । म आउँदा पालुङ्टार नगरपालिकामा १८/१९ किलोमिटर मात्रै पिच थियो अहिले ४०/५० किलोमिटर पिच भएको छ । यसको मतलब हाम्रो कार्यकाल सकिँदै गर्दा सय किलोमिटर सम्म पिच गर्ने लक्ष्यमा छौँ । शिक्षामा पनि केहि परिवर्तन भएको छ । सामुदायीक विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । स्वास्थ्य विमामा पनि पालुङ्टार अगाडि नै छ । कृषिमा पनि राम्रो वातावरण तय भएको छ । हिजो बाँझो रहेका जमिन जोतिन थालेका छन् । व्यवसायीक कृषि उत्पादन हुन थालेको छ । लिचि लगाएतका उत्पादनहरुलाई पकेट क्षेत्र बनाएर काम गरेका छौँ । बार्षिक ५ करोड भन्दा बढिको लिचि पालुङ्टारबाट निर्यात हुन्छ । हामी समग्रमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सडक र इन्फाइन्स्टक्चरमा केहि फड्को मारेका छौँ । यीनै कुराहरुलाई मैले उपलब्धि मानेको छु ।
६) तपाइँको नगरमा जनअपेक्षा पुरा गर्ने गरि काम भएको छ ?
केस्लाई जनअपेक्षा मान्ने भन्ने हुन्छ, पहिलो त । हाम्रो श्रोत र साधनलाई आधार मान्ने हो भने हामीले जनअपेक्षा अनुसार काम गरेका छौँ । भर्खर विकास उन्मुख नगरपालिका, जुन नगरपालिकाका इन्फाइन्स्टक्चरहरु छैनन् । सडक, खानेपानी शिक्षा, रोजगारीमा जुन अपेक्षा छ त्यो अनुसारको हुन सकेको छैन । हन्ड्रेड पर्सेन्ट जनता सटिस्फाई छन् भन्यो भने मलाई पनि पाप लाग्छ । तर म के दावाका साथ भन्छु भने पालुङ्टार नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले पालुङ्टारबासीहरुलाई कुनैपनि हालतमा धोका दिएका छैनन् । दिँदा पनि दिँदैनन् । अहिलेका जनप्रतिनिध सम्झनलायकका जनप्रतिनिधि हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।